उपत्यकामा सवारी लाइसेन्सकाे आवेदन मंसिर पहिलाे सातादेखि खुल्ने
काठमाडौं : सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि मंसिर पहिलाे सातादेखि पुन: अावेदन खुला हुने भएको छ । दशैँ सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै लाइन्सकाे अावेदन स्थगित गरिएकाे थियाे । अब मंसिर ७ गतेबाट पुन: अनलाइन फाराम खुल्ला गरिने यातयात व्यवस्था विभागले जानकारी
राँझा । बाँकेको कोहलपुरमा सडक दुर्घटनामा परी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गोमा शाहीको बुधबार राति मृत्यु भएको छ । कोहलपुर निवासी शाही सवार मोटरसाइकललाई गए राति पौने ८ बजे कोहलपुरको विद्युतराेड नजिक सडक पार गर्ने क्रममा एक भ्यानले ठक्कर
भेरीगङ्गाका १५ सय घरधुरीकाे पीडा : ३५ वर्षदेखि भोग-चलन, तर छैन जग्गाकाे लालपूर्जा
सुर्खेत । भेरीगङ्गा नगरपालिका–८ सुर्खेत मैनतडावासीले ३५ वर्षदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा पाएका छैनन् । जग्गा भएर पनि लालपूर्जा नपाउने नगरपालिकाको वडा नं ८ का बासिन्दा मात्र होइनन ६, ७, र ९ वडाका बासिन्दाको पनि समस्या उस्तै छ ।
ट्रान्सफर्मर पड्किएर अागलागी, स्थानीयकाे घरमा समेत क्षति
काठमाडौं । स्वम्भूस्थित ठूलोभर्‍याङमा बिजुलीकाे ट्रान्सफर्मर पड्किँदा एक घरमा समेत क्षति भएकाे छ । विद्युतकाे ट्रान्सफर्मर पड्किएर अागाे लागेपछि नजिकैकाे घरमा घरमा क्षति पुगेकाे जनाइएकाे छ । अाज बिहान ७ बजेतिर ट्रान्सफर्मर पड्किएर अागलागी भएकाे स्वयम्भू प्रहरी स्राेतले जनाएकाे छ
राष्ट्र बैंकमा जागिर खुल्याे : ११४ कर्मचारीका लागि समावेशी रुपमा दरखास्त अाह्वान
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेका विभिन्न तहका पदमा विज्ञापन खुलेकाे छ । विभिन्न ११४ पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त अाह्वान गर्दै राष्ट्र बै‌ंकले विज्ञापन खाेलेकाे हाे । दरखास्त दिने म्याद एक महिना (२०७५ साल कार्तिक २९ गतेबाट मंसिर २८ गतेसम्म)
रोल्पाको जडीबुटी-तेल काठमाडौँसम्म
कात्तिक। पूर्वी रोल्पाको सुलीचौरमा स्थापित उद्योगले स्थानीय जडीबुटी प्रशोधन गरी
सुर्खेत । भेरीगङ्गा नगरपालिका–८ सुर्खेत मैनतडावासीले ३५ वर्षदेखि भोग चलन गर्दै
पर्वतका युवाद्वारा देउसीभैलो खेलेकाे रकमले सडकवत्ती जडान
पर्वत। देउसीभैलोबाट सङ्कलित रकमले यहाँका युवाले सडक बत्ती जडान गरेका छन्
मेस्सीले थापे ‘पिचिची’ अवार्ड, ‘वर्ष खेलाडी’ अवार्ड पनि मेस्सीलाई नै
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, स्तनपानकक्षको पनि तयारी
जुन गाउँपालिकामा बालकको अन्तिम संस्कारकालागि जमिनसम्म पाइएको थिएन (भिडियो)
थाइ बालकको बक्सिङ रिङमै मृत्यु, थाइल्यान्डमा खैलाबैला (भिडियाे सहित ) 372340
न्यूज २४ काे विशेष अभियानमा निर्मित सप्तरीकाे मुसहर वस्तीका ५२ घर हस्तान्तरण 139260
वामदेवलाई अर्को झड्का, प्रधानमन्त्रीद्धारा गौतमकाे नयाँ प्रस्ताव अस्वीकार 100040
६ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेका दीपिका र रणवीरकाे विवाह आज,पाहुनाले मोबाइल लान नपाइने 88760
पूर्व राजा शाह र कांग्रेस नेता सिंहको भेटको तस्बिर सामाजिक संजालमा भाइरल 86880
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिमा फेरबदल गर्ने भएको छ । पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा जनअपेक्षा अनुरुप आर्थिक रुपान्तरण गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेसले आर्थिक नीति
म्याग्दी । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा सहकार्य गर्न तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)ले नमान्दा आफूहरु जनयुद्धमा जानुपरेको बताएका छन्। बुधबार नेकपा म्याग्दीले पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको
‘मलाई सांसद् बन्न पार्टीबाटै रोकियाे, मलाई बदनाम गर्नेहरु पश्चात्ताप गर्दै भुटभुटिनेछन्’
काठमाडौं। नेकपा नेता वामदेव गौतमको संसद्को मार्ग तत्काल बन्द भए पनि सक्रिय भूमिकाका लागि गौतमको प्रयास जारी छ । राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गर्न र त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिन उनले
काठमाडौँ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ बेल्जियम शाखाको अध्यक्षमा बाबुराजा लामा तामाङ र महासचिवमा नन्दराज घले निर्वाचित हुनुभएको छ । बेल्जियमको लुभेनमा आज भएको दोस्रो अधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मुना राई र
कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री मङ्सिर १३ गते नेपाल आउँदै
काठमाडौं । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदो मङ्सिर १३ गते काठमाडौँ आउनुहुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ । दुई दिनको त्यो भ्रमण पारस्परिक हित र चासोका
विराटनगर, २८ कातिक : प्रदेश नं १ का कार्यवाहक मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश समृद्ध बनाउने प्रदेश सरकारको सङ्कल्पमा आम जनताको सहयोग अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र बादल शहीद परिवार भेट्न गाउँमा
बेनी । पारिवारिक भ्रमणको सिलसिलामा म्याग्दीमा रहनु भएका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले शहीद परिवारलाई भेट्नु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष दाहाल र गृहमन्त्री थापा
काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले नक्कली स्याम्पु र विएमसी मसला बनाउने सामानसहित सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ । परिसरको टोलीले
बसमा महङ्गो भाडा लिएर ठगी गरेपछि..
काठमाडौँ। सुविधासम्पन्न पर्यटक बसको महङ्गो भाडा लिएर साधारण बसमा यात्रा गराउने पोखराको शुभ अधिकारी ट्राभल्सलाई कारवाही गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले
प्रहरीकाे गाडीबाट एक थुनुवा फरार भएपछि सहयोग गरेको अभियोगमा प्रहरी पक्राउ
दाङ । दाङमा एक जना थुनुवा फरार भएका छन् । कार्यालयबाट म्याद थपेर ल्याउँदै गर्दा उनी प्रहरीकाे गाडीबाट हाम फालेर
एउटै फिल्ममा देखिने भए सलमान र शाहरुख
६ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेका दीपिका र रणवीरकाे विवाह आज,पाहुनाले मोबाइल लान नपाइने
यस्ताे बनेर आयो गायिका संगिता राना प्रधानको ‘प्रतिबिम्ब तिम्रो’ (भिडियोसहित)
झवेरीको ‘मरजावा’मा राकुल प्रितको इन्ट्री, सिद्धार्थसँग अनस्क्रीन रोमान्स गर्दै !
‘मेरी बास्सै’ मा प्रतिभा र बखतको जोडी
‘गोपी’ काे रिलिज मिती वर सर्यो – माघ १८ मा रिलिज हुने
गणेश मन्दिरमा फिल्म ‘दाल भात तरकारी’को शुभमुर्हत
क्यान्सरसँगको लडाईंमा केन्द्रित मनिषाकाे अात्मकथा ‘हिल्ड’ सार्वजनिक
‘स्पाइडरम्यान’ र बहुचर्चित ‘पात्रहरूको ब्रह्माण्ड’ सिर्जना गर्ने लेखकको निधन
काठमाडौं। भूकम्पले भत्काएको धरहराको आडैमा ११ तले नयाँ धरहरा बन्ने भएको छ । धरहरा निर्माणका
बेरोजगारीको नाममा ब्रम्हलुट, ठुला व्यापारीलाई ५० करोडसम्म
काठमाडौं। विपन्न तथा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन भन्दै ‘युवा स्वरोजगार कोष’ मार्फत सरकारले गरेको अर्बौं
प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्ष मर्मत गरिँदै, भाडामा कहिलेसम्म चलाउने संसद ?
काठमाडौं । आठ वर्षभन्दा बढी समय संविधानसभाको वैठक कक्षका रुपमा प्रयोग भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको
वित्तीय बजारमा पूँजी बृद्धिपछि पनि बैंकहरुले आकर्षक नाफा गर्दै
काठमाडौं । वित्तीय बजारमा पूँजी बृद्धिपछि पनि बैंकहरुले आकर्षक नाफा गरिरहेका छन् । स्टाण्र्डड चार्टड
मध्यभोटेकोशीको आइपिओ बुधबारदेखि निष्काशन हुने
नेशनल हाइड्रोको खुद नाफामा उच्च बृद्धि
तपाइलाई यी सानो टिप्सले दिनेछ सुन्दर र ग्लोइगङ स्किन !
न्याय माग्दै निर्मलाका बाआमा अनिश्चितकालिन धर्नामा, आमरण अनसनको चेतावनी
बच्चा कम जन्मदा विश्वका अधिकांश देशमा हजुरबा हजुरआमाहरु बढ्दै
टिटानसको खोप अभाव, विरामी प्रभावित
काठमाडौं । फलाम या खिया लागेको सामानले चोट पु¥याउँदा तथा जनावरले टोकेमा टिटानस ब्याक्टेरियाको खतरा
पीडाको औषधी हाँसाे
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेका विभिन्न तहका पदमा विज्ञापन खुलेकाे छ । विभिन्न ११४
एकल महिलालाई उद्यमशीलताबाट आत्मनिर्भर बनाउन वडा-वडामा समूह गठन
मुम्बाई । बलिउडका ६ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धलाई समहाल्दै आएका नायक दीपिका पादुकोण र नायक रणवीर
यमनमा अमेरिकी ड्रोन आक्रमण : ड्रोनबाट प्रहार गरिएका क्षेप्यास्त्रबाट मारिने अधिकांश सर्वसाधारण
थाइ बालकको बक्सिङ रिङमै मृत्यु, थाइल्यान्डमा खैलाबैला (भिडियाे सहित )
काठमाडौँ, २८ कात्तिक । सूचना प्रविधिको उत्कृष्ट प्रयोग गरी कार्य गरेबापत सरकारी संस्थालाई दिइने ‘डिजिटल गभर्नमेन्ट अवार्ड’ नेपाल प्रहरीले प्राप्त
वासिङ्टन । एक दशकसम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी बिक्रीको रेकर्ड बनाएको स्मार्टफोनको ठाउँमा अब नयाँ कुन उपभोग्य वस्तु आउला ? यसकाे
‘रन अफ दि रिभर’मा आधारित आयोजनाको विद्युत उत्पादनमा कमी
काठमाडौं, २७ कात्तिक । सञ्चालित आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । कार्तिक अन्तिम सातासम्म बर्षा नहुनु र हिमालमा हिउँ
पोर्तुगल बिशेष : मानव तस्करीका २३ अभियोगमा २ नेपाली सहित ३ जनालाई लाई १४ र १३ बर्ष कैद सजाय
पोर्तुगलको इभोरा पुनरावेदन अदालतले मानव तस्करीको २३ ओटा अभियोगमा २ नेपाली नागरीक सहित् ३ जनालाई
नेपाली चाडपर्व चिनाउनु लागि जापानमा देउसीभैलो कार्यक्रम (फाेटाेफिचर)
काठमाडौं : सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि मंसिर पहिलाे सातादेखि पुन: अावेदन खुला हुने भएको छ
कावासोतीमा बस पल्टियाे, १६ जना घाइते
आजको राशिफल : कार्तिक २९ गते, बिहीबार